Maxaa keena in qof is qarxiyo? | Doodwadaag waa Danwadaag.
Is qarxintu waxay ka jirtaa dhammaan caalamka Muslimiinta ee sunniga ah. Soomaaliya waxay ka mid ahayd kuwii ugu danbeeyay ee la baray ama la soo gaarsiiyay qaabkaan cusub ee dagaalka. Marka waa dhib wayn oo caalamka Islaamka badankiisa haysata. Waa arin u baahan inaan la fududaysan ee si run ah loo waajaho oo wax looga qabto. Halkii dawladaha dhaqaalaha iyo xooga haysta isku mashquulin lahaayeen, inay cintiraafaan cudurka islamarkaasna daawo u raadiyaan waxay ku mashquuleen fajac, argagax iyo eedayn. Waxay u muuqataa wakhtigaan hadda ah inaan eedayn waxba tarayn, muhiimna ahayn. Caalamak Muslimiintu wuxuu ku jiraa khatar aad u wayn oo aan horay loo arag. Taas oo keeni karta in wax walba oo caalamka Muslimiinta yaala dhamaadaan. Sida Diinta oo aad u baa’bada, dadka oo leda, jahliga iyo colaada oo aad u faafa, dawladaha oo duma. Marka hadda waxaa haboon in si dhab ah caalamka Muslimiintu u baraarugaan una soo jeestaan sidii ay u daawayn lahaayeen dhibtaan soo food saartay. Waxay u baahantahay in la galiyo, balaayiin doolar, wakhti, fikrad iyo caqli, isla markaasna si rasmi ah ay uga mid noqoto siyaasadaha dawladaha Muslimiinta ah, ee maanta jira.
Is qarxintu waxay xiriir la leedahay ama sababay xaaladda adage e dhinacwalba ah ee caalamka Muslimiintu maanta marayo. Sida siyaasadaha dawladaha jaahwareersan, tacliinta khariban ee aan ujeedada cad lahayan, jehliga iyo aqoon darada aadka u baahday, nolol xumada iyo gaajada, naxariis darada iyo dagaalka joogtada ah. Waxaa intaas dheer thiqaafada, culture ka caalamka Muslimiinta ee maanta jira oo aad u dhiiri galinaya dagaalka iyo in wax walba lagu xalliyo, xoog iyo kala adkaasho. Wadcigaas murugsan ee caalamka Muslimiintu maanta ku jiraan waxay ka qayb qaadatay faafida dhaqanka is miidaaminta ee hadda jira. Dadka cilmu nafsiga yaqaan waxay og yihiin in nafsada bixinteedu ku xiran tahay qiimaheeda. Haddii nafsada qofku ay dhib ku jirto oo aysan waxba haysan, sida cilmiga, coodka, raaxda, fikirka fiican, magaca, wax qabadka iyo isla waynida waxaas oo dhan haddii ay nafsadu waydo waxay nolosha ka doorbidaysaa dhimashada. Taasina waa mid caadi ah oo caalamka oo dhan ogyahay. Wadamada sancada iyo dhaqaalaha ku hormaray ayaa ugu badan isdigalka qofku naftiisa dilayo. 40,000. Ayaa lagu qiyaasaa waddamada Jabbaan, Jarlmalka, Maraykanka isku-cel-celis. Kaliya waxaa muslimiinta ku soo kordhay in naftii qiimo beeshay ee nolosha nacday magac iyo taariikh hore ee Muslimiintu lahaayeen lagu raadiyo. Oo waliba loogu sii daro ta’wiil diini ah oo oranaya, Alle ayaa kaa baal marinaya is qarxintaada maxaa yeelay waxaad raadinaysay oo soo celinaysan sharaftii iyo qiimihii Islaamka iyo Muslimiinta. Marka is qarxinta Muslimiinta ku badatay waxaan oran karnaa waa cudur caam ah oo caalamiga oo loo yaqaan “Depression” kaas oo keena ‘suicide act’ Kaas oo caadi ahaa ayaa loo rogay, ujeedo iyo hadaf sareeya oo laxaqiijinayo, oo ku saabsan, Diin, dal, xadaarad iyo Janno. Markaas ayuu suuq fiican oo caalami ah isu rogay.
Falka xun ee is miidaamintu wuxuu ku bilaamay qaab caadifad iyo rafaad ka yimid. Haddii hadana marka la xallinayo ama la daawaynayo cudurkaas halista ah, lagu qaabilo, argagax, layaab, naqdi, nacayb, eedayn iyo wixii lamid ah arintu way ka sii daraysaa. Xal iyo nabadna lama helaayo. Daawadu waxay ahaan lahayd in si cilmi ah loo baaro cudurka kadibna si cilmi ah daawo loogu soo saaro. Culumada iyo mufikiriinta caalamaka Muslimiinta waxaa ka muuqda caro iyo argagax. Haddii aan Ilaamka, Quraanka, Madaarista, Sucuudiga, fahamka wahaabiga aan ee dayno, oo aan ku mashquulno inaan galno qolkii nacaybka iyo dagaalka ee ayay horay ugu jireen kuwa khaldan ama la halday maxaan soo kordhinay. Kulligeen waxaan noqonaynaa inaan is qarxino, oo qofba qof isku qarxiyo ama kooxba koox isku qarxiso. Haddii argagixisadu goobaha caamka ah, sida masaajida, hotelada, garoonada, goobaha madadaalada isku qarxiyaan, kuwa ka soo horjeedana ku dadaalaan naqdinta iyo la dagaalanka Diinta, Islaamka, Masaajida, Madaarista quraanka, wadaadada Diinta maxaa inaga soo haraya. Maxaan soo kordhinay? Maxaan daawaynay? Umad kasta xilli xilliyada ka mid ah, cudur waa soo waajihi karaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay xikmadii Nabi Yuusuf oo kale oo daaweeyay 7 sano oo abaar iyo gaajo ah. Waa inaan cintiraafnaa cudurkaan halista oo inagu habsaday daawo rasmi ahna aan u raadinaa.
Waxaa jiray wakhti taariikhda caalamka ka mid ah oo Diinta Islaamku wax wayn ku soo kordhisay adduunkaan. Taas oo aysan haysan markaas ummadihii adduunkaan ku noolaa. Waxaa jirtay mabaadi badan oo aad u khayr badan oo Islaamku keenay caalamkaan. Xorriyad, cadaalad, sinaan, is tixgalin, naxariis, wax wada cun, casabiyad la’aan, cilmi baarid iyo fikir, ilaahyada beenta ah oo laga xoroobo, wax badan oo aan maqaal yar oo kan oo kale ah lagu soo koobi Karin ayaa Islaamka adduunkaa keenay. Nabi Muxamad (Nks) wuxuu ahaa Nabigii risaaladaas keenay ama lagu soo dajiyay. Haddii Muslimiintu fashalmeen oo ay ku fashalmeen inay caqligood isticmaalaan, cilmi keenaan, caadooyinka xunxun ka tagaan ma Islaamka Naftiisa ayaa la eedaynayaa? Islaamku ama Diintu waa ERAYO AMA WORDS kaliya u baahan in lala yimaado caqligii fasiri lahaa oo ka dhigi lahaa wax Insaanka u khidmaynaya ama wax ku soo kordhinaya. Islaam only is a statement. Waxaad u baahantahay inaad adigu maamusho, meelayso, fasirto, ka faa’iidaysato, dantaada aduun iyo aakhiraba ku gaarto. Ruuxdaada iyo Diintaada ugu khidmayso. Haddaba anigu waxaan arkaa fashal wayn oo Muslimiinta ku yimid. Marhaddii Muslimiintu fashalmeena Islaamkuna waa fashalmayaa maxaa yeelay, dadkii isticmaali lahaa ayaa fashalmay.
Haddii aan si kale u dhigo Mabaadi’da Islaamka ku qoran ee mar hore Quraanku inoo sheegay, haddana looqa dhaqmo wadamada reer galbeedka, waa islaam. Markaas Islaamka wadamada reer galbeedka jooga ma fashalmin ee waa islaam sax ah, maxaa yeelay dadka isticmaalaya ayaa nool oo aan fashalmin. Haddii wadamadii iyo bulshooyinkii Muslimiintu fashalmeen, si otomaatig ah ayaa Islaamkiina u fashalmay. Sidaas daraadeed aan soo celino Insaan rasmi ah oo xor ah oo si dhab ah u fikiraya. Markaas ayaa fahamkii Islaamka oo fiicnaa soo noqonayaa.